Shiinaha Qaybo caag ah warshad iyo soosaarayaasha | Lead
Haddii aad leedahay qaybo balaastig ah waxaad u baahan tahay mashiin ama qaabeyn, waxaan nahay mid ka mid ah ilaha ugu kartida badan ee la awoodi karo, shaqadana waan ku qaban karnaa si sax ah.
Hadaad leedahay qaybo caag ah Waxaan ubaahanahay mashiin ama qaabeyn, waxaan nahay mid ka mid ah ilaha ugu awooda badan uguna macquulsan, waana ku guuleysan karnaa shaqada si sax ah.
Agabkee balaastik ah oo aan sameyn karno maxayna yihiin aaladda guryaha?
Isbarbardhigaya qalabka biraha, sheyga balaastiggu wuxuu leeyahay qiime jaban, miisaan fudud, caabbinta daxalka wanaagsan iyo faa'iidooyinka waxqabadka kuleylka-kuleylka wanaagsan.
1. PTFE: sidoo kale loo yaqaan Teflon, waxay leedahay caabbinta heerkulka sare ee wanaagsan, caabbinta daxalka wanaagsan, saliid sareyso, faa'iido la'aanta iyo korantada faaiidada korantada.
2. PC (Polycarbonate): waa cusbi adag oo termoplastic ah, wuxuu leeyahay farsamo wanaagsan, hufnaan sare iyo xorriyadda midabaynta iyo Waayeel-iska caabbinta iyo guryaha diirimaadka diidaya.
3. Nylon: wuxuu leeyahay awood farsamo oo sare, dhibic jilicsan oo sare, iska caabbinta kuleylka wanaagsan, isku dheelitirka isukeenida yar, iska caabbinta wanaagsan, dahaadhka korantada oo wanaagsan Is-bakhtiiye, aan sun lahayn, ur lahayn iyo iska caabin cimilo fiican Ka sokow, ka dib markii lagu daro galaas-koob, xoogga siligga ayaa la kordhin karaa ilaa 2 jeer.
4. ABS: waa polymerka ugu weyn uguna isticmaalka badan. Waxay leedahay iska caabin saameyn wanaagsan, iska caabinta kuleylka, iska caabinta heerkulka hooseeya, iska caabinta kiimikada iyo guryaha korantada, iyo fududahay in la farsameeyo.
5. Acrylic: sidoo kale loo yaqaan PMMA, wuxuu leeyahay hufnaan wanaagsan, xasiloonida kiimikada iyo iska caabinta cimilada, si sahlan loo dheehdo, u fududahay ka shaqeynta, muuqaalka quruxda badan iyo waxyaabo kale.
Waa kuwee codsiyada qalabka balaastigga ah ee badanaa loo isticmaalo?
Sababtoo ah qiimo jaban iyo miisaan fudud, qalabka balaastigga ah ayaa badanaa loo isticmaalaa dhismaha, baabuurta, warshadaha, caafimaadka, gaadiidka, elektiroonigga iyo codsiyada kale.
Qalabaynta qaybaha tayada ee UHMW. Waxaan mashiinka ku dhejin karnaa qaybo adag Mashiinnada CNC Swiss iyo Xarumaha leexinta CNC.
Ultra-High Molecular Weight polyethylene (UHMW) waa caag cufan leh, oo ku habboon qalabka mashiinka fur oo u baahan iska caabin aad u sareysa si loo xidho loona xoqdo. Waxay leedahay saameynta ugu sareysa ee saameyn kuleylka walxaha kuleylka leh waxayna aad ugu adkeysataa inta badan qalabka wax gubaya UHMW is-saliidayn iyo si fiican u qabata heerkulka aan caadiga ahayn, laakiin wuxuu bilaabaa inuu ku jilciyo heerkulka sare. Waxay ka duwan tahay naylonka, waxay leedahay heer aad u hooseeya oo nuugista qoyaanka, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon in loo isticmaalo jawiga qoyan.
Ultem waxay leedahay mashiinka qiimaha mashiinka ee 0.7 marka la barbar dhigo birta 12L14.
Ro Dhabar jab
Mashiinka Mashiinka Lead Lead Wuxi waxay soo saartaa qaybo naxaas ah iyadoo la adeegsanayo habab badan oo kala duwan: makiinado, shiidid, rogid, qodista, goynta laser, EDM, karbaashid, bir xaashi, shubid, been abuur, iwm.
Hore: Qaybaha Titanium